Maninona aho no mandika ho an’ny GV ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:24 GMT
Ao anatin'ny fankalazàna ny Andron'ireo Mpirotsaka an-tsitrapo, mandefa ity fitsapankevitra ity ny GV ho an'ny vondrom-piarahamonina Lingua. Angamba aho amin'izao fotoana izao miasa ho an'ny GV, saingy tany am-boalohany dia nanjohy ny GV nanao ny asan'ny mpandika lahatsoratra niasa an-tsitrapo. Misy fanontaninaa telo ao anatin'ilay fitsapankevitra: Maninona ianao no nanomboka nandika, maninona no manohy mandika ary inona no nentin'ny GV ho anao?.
Vovonana Global Voices 2010 tao Shily, ny fivahinianana voalohany nataoko niaraka tamin'ny Global Voices. Sary an'i David Sasaki tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Nanjohy ny GV aho, niasa ho mpandika lahatsoratra, araka izany dia ny Lingua no sampanasa voalohany nihaonako tamin'ny GV. Voalohany indrindra dia nanjohy azy aho satria nanomboka tamin'izany, tamin'ny 2009, 1% monja ireo votoaty amin'ny teny Arabo tety anaty aterineto, na dia misy 300 tapitrisa aza, raha kely indrindra, ireo mpiteny arabo. Tiako ny ho antony iray hampitombo ny isan'ireo votoaty amin'ny teny arabo ety anaty tranonkala ary mihevitra ho mahomby ao anatin'io sehatra io aho, mivantana na ankolaka.
Manohy mandika aho mba hahalala momba ireo toerana tsy mbola nalehako mihitsy, hahafantatra kolontsaina tsy mbola niainako, hianatra momba ireo tahiry ara-tsaina sarobidy tsy mbola novakiako hatrizay tany anaty boky tsotra na lahatsoratra an-gazety tsotra.
Nanome zavatra betsaka ho ahy ny GV. Hifandray amin'ireo olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Hahafantatra ireo namana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices avy aminà lafim-piainana isankarazany ary mifanindran-dàlana amin'izay ihany koa dia mifampizara toepanahy manaja ireo soatoavina fototra. Nomen'ny Global Voices ahy tao anatin'ny 5 taona latsaka ny fahafahana handeha taminà firenena maherin'ny 20, mivantana na ankolaka.
Omen'ny GV fahafahampo ny fahatsapanao hoe mifandray aminà hetsika iray izay mitondra soa ho an'ny vondron'olona iray midadasika kokoa, sady manome dindo misimisy kokoa, na dia toa bitika aza ny fahitàna izany amin'ny fotoana andraisanao anjara.
Nasehon'ny GV ahy, ho toy ny zavatra voalohany niainako, ny fomba ahafahan'ireo manampahaizana manokana avy amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana manokana ny fotoanan-dry zareo sy ny angovony ho anà tanjona iray lehibe kokoa.
Farany, tiako ny hanolotra FISAORANA GOAVANA ho an'ireo rehetra ato anatin'ny vondrom-piarahamonina GV, ataonareo ho toy ny andro tokana an-tany ny isanandroko.